အပြာကားအကြည့်များတဲ့ အထန်သမားလေးဖြစ်နေပြီလား? | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး အပြာကားအကြည့်များတဲ့ အထန်သမားလေးဖြစ်နေပြီလား?
အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ယောကျာ်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝစိတ်ဆန္ဒအလျောက် အပြာကားကြည့်တာက သဘာဝပါပဲ။ ရှက်စရာ ကိစ္စလဲ မဟုတ်သလို လှောင်ပြောင်စရာ ကိစ္စတစ်ခုလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အဘိုး အဘေးတွေခေတ်တုန်းကနဲ့ မတူတော့တဲ့ ၂၁ ရာစုခေတ်မှာတော့ လက်ထဲမှာ ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေ၊ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေကနေ တဆင့် အသက်ကြီးငယ်မရွေး အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ ဒီလို အပြာကားတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ကြည့်လို့ရနိုင်လာပါတယ်။ သာမန်လူ့သဘာဝ သွေးသားတက်ကြွမှုကြောင့် တခါတလေ အပြာကားကြည့်တာလောက်က ကိစ္စမရှိပေမယ့် တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုတဲ့အတိုင်း အလွန်အကြူးဖြစ်လာရင်တော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါဖြင့်ရင် အပြာကားအကြည့်များတဲ့ သူတွေမှာ ဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးတွေ တွေ့ရနိုင်လဲဆိုတော့
(၁) ကြည့်ပြီးရင်း ကြည့်ချင်ဖြစ်နေမယ်…
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အပြာကားစွဲလန်းမှုရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဆေးလိပ်စွဲနေသူ ဆေးလိပ်မသောက်ရမနေနိုင်သလိုမျိုးပဲ အပြာကားတွေကို မကြည့်ရမနေနိုင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ တနေကုန်တနေခန်း အပြာကားတွေကို ကြည့်ရင်းနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်မှန်းမသိ ကုန်နေမယ်။ အပြာကားတွေ ကြည့်ရင်းနဲ့ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့အထိပါ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ တော်တော်ဆိုးရွားနေတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ…
(၂) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းလာမယ်…
တနေကုန် အပြာကားတွေမှာပဲ စိတ်ရောက်ပြီး ဟိုမသွားနိုင် ဒီမသွားနိုင် အစားအသောက်ပျက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလာပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုတွေဖြစ်တဲ့ အညောင်းမိတာတွေ၊ အမြင်အာရုံထိခိုက်တာတွေ၊ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောအားနည်းမှုတွေပါ ကြုံတွေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ပြင်ပလောကနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်လာမယ်…
အပြာကားတွေကို အလွန်အကြူးစွဲလမ်းနေတတ်သူတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ နောက်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို အာရုံစူးစိုက်မှုတွေ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ မရှိတော့တာပါပဲ။ အဲ့အတွက် ကိုယ့်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ အေးစက်လာမယ်… အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက်တွေဖြစ်ပြီး ဒါမှဒါပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး လက်တွေ့လောကမှာ အဆင်မပြေတာတွေများလာတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ခံစားလာရတတ်ပါတယ်။
(၄) လက်တွေ့ဘဝနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အမြင်တွေ တွေးမိလာမယ်…
အပြာကားဆိုတာ အမှန်တိုင်းပြောရရင် လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင် မဟုတ်တာတွေကို အဟုတ်လုပ်ထားတဲ့ လန်ကြုတ်ဇာတ်လမ်းတွေပါပဲ။ ဥပမာ – လိင်တံကြီးတဲ့အမျိုးသားတွေ၊ ကြီးမားလှတဲ့ တင်တွေ ရင်တွေရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ နောက်ပြီး လက်တွေ့လောကမှာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ သားအမိ၊ သားအဖ ဇာတ်လမ်းတွေ အစရှိတာတွေကတော့ အပြာကားထဲက လန်ကြုတ်ဇာတ်လမ်းတွေပါပဲ။ ပြဿနာက အပြာကားစွဲလမ်းတဲ့သူတွေမှာ ဒီလို အပြာကားတွေထဲက လက်တွေ့မကျတဲ့ အရာတွေကို အပြင်လောကမှာလဲ တထေရာတည်းတူမယ်လို့ တွေးမိလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးလာရင်တော့ အပြာကားထဲက အကြောင်းအရာတွေအတိုင်း လက်တွေ့ဘဝမှာ လိုက်လုပ်လာတတ်တဲ့အတွက် ဒီအခြေအနေက စိုးရိမ်ရပါတယ်။
ဒီလို အပြာကားစွဲလန်းမှု လက္ခဏာတွေပြလာပြီဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ?
အပေါ်ကပြောထားတဲ့ လက္ခဏာတွေ ကိုယ့်မှာရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ စိတ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုတွေကို လျှော့ချပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု Activity တွေ လုပ်တာ၊ စာအုပ်ဖတ်တာတွေကို စိတ်ပြောင်းအောင် လုပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်.
ဒီလို အခြေခံစိတ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းတွေသုံးလို့မှ မရဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုတွေ ခံယူသင့်ပါတယ်။